Ndakazoisvira Mvana yandaifudza: The Full Six Phases – Vanoda Zvinhu
Ndaive mu surgery ndobva kwapinda mudzimai aive around late twenties. Ndakamutarisa achiuya kuteburu kwandaive ndigere achifamba zvinyoronyoro nemakumbo matsvuku anoyevedza akakwana, aiva murefu zviri pakati nepakati akavakwa zvinonwisa mvura zvekuti waiona panotangira hip kana chiuno chake zvichidzika kuita round figure uye aiva asina chimimbamuteku. Ndakaramba ndakayeva patient yangu iyi, iye akarambawo akanditarisa mumaziso chaimo, maziso ake aiva machenachena makuru eruvara rwe brown, bvudzi rake riri dark brown zvakare ari mutsvuku, ndakanga ndisati ndamboona runako rwakadai kubva ndaberekwa, runako rwaiva natural, ndakamuda ipapo.
Paakandiudza kuti aifunga kuti ava nepamuviri saka aida kutariswa, moyo wangu wakabva warwadza nekuti ndakanga ndatoda tsvarakadenga iyi, iya inonzi love at first sight. Zvisinei ndakangoti kana asina kuwanikwa bedzi ndichatochata naye chete despite everything. Ndakamuti abvise pant rake arare pa stretcher ndimuongorore kuti aiva nepamuviri here. Zvidya zvake nedumbu zvaive zvakaita ruvara rwe gold rwunoyevedza, beche rake raiva rakanyatsoshevewa choya chaakutanga kubuda paganda dzvuku. Pandakamuti avhure makumbo nditange kumutarisa, matinji ake aive pakati nepakati kwete mazirefurefu anoguma akubuda zvimvura kana zvidikita uye beche rake raive risina kana kamweya kana katsvina zvako. Pandakamupinza zvigunwe zviviri kubeche kuti ndinzwe kuti aive azvitakura here, mwanasikana akaruma muromo wake wezasi zvinyoronyoro zvinoyevedza wanike atowedzera runako rwake achibva anditarisa mumaziso chaimo neni ndakamutarisawo throughout hana yangu ikarova nerudo. Ndapedza examination yangu, ndakamuudza kuti aiva nepamuviri ndokumubvunza kuna baba vemwana wake uyu. Moyo wangu wakatakwaira nerufaro kuti aive asina kuwanikwa asi kuti akanga anyengerwa nemumwe saimba saka akanga asisadi nezvake asi aida kuchengeta pamuviri pake semunhu aisawirirana ne abortion.
Nine months dzakapera ndichimufonera nekunomuona nekumuendesa kunoona gynecologist wake seshamwari yake yepedyo ndichimupa shoulder to cry on asi ndisingamubati kana kumutsvoda chaiko, izvi zvakaenderera mberi kusvika mwana aponwa ava ne 6months ndichingofudza mwanasikana uyu. Nerimwe zuva takaenda out as usual ndokudzoka kumba kwake. Tambotamba hedu nemwana aive nemusikana kwekanguva ndobva ati omboenda kubedroom kwake. Ipapo ndakabva ndati its now or never, ndakatevera kubedroom ndokumukumbira kuti ndipindemo, iye haana kupikisa nekuti akanga ava kuvimba neni zvikuru. Ndapindamo takangotarisana zviya zvemasanga ndobva maziso edu aita lock. Mwanasikana akagara pamubhedha ini ndikabva ndapfugama mberi kwake ndokutanga kumutsvoda zvinyoronyoro ndichimuudza madiro andaimuita, akandiita kiss back zvainaka samare achindiudzawo kuti anondida, mboro yangu ikabva yamira ipapo.
Ndakamubata mazamu ake aive achakati twi nyangwe zvake ainge ayamwisa mwana wake kwemwedzi mitatu asati amupa bhotoro remukaka. Ndakamutsvoda tuminyatso twake tweruvara rwe light brown twaive twamira kuti twi ndokutanga kumubvisa mbatya dzose neka sexy pant ke lace kaiva kakafanana ne bra yake, ndokuzomubata her shapely waist ndichipuruzira softly, iyewo akabata matama angu nemaoko maviri achinditsvoda zvinonaka nemukanwa muri fresh achiruma ma lips angu nemhuno nenzeve softly achitamba nerurimi rwangu. Mwana uyu aive nyanzvi pakukisa nekubata muviri wangu panomisa mboro. Muviri wake wainhuwirira perfume iya inonzi lavender hapwa nebeche zvaiva zvakashevhewa zvisina kana bvudzi, hapana kana kamweya kakaipa kaibuda paari nyangwe zvazvo kwaipisirira, aigeza mwana uyu ganda rake richitsvedzerera riri soft sedonje…..
Takatanga kubatana kuzvombo, beche rake raive rakazvimbirira pachinina richiyevedza kutarisa, ndakamukama matinji aive soft zvinyoronyoro iyewo achibata nekuita squeeze machende angu gently, ipapo mboro yangu yakanga yamira sechipikiri chatorwa ne magnet yakatanga kuvhuta nekuchemerera tumisodzi tweshungu dzekuda kusvira mukadzi, ukuwo beche rake raiva radziya ratota tumvura twehavi yemboro. Ipapo ndakakotama ndokusvisvina matinji ake one at a time iye achiita moan softly with pleasure achipuruzira musoro wangu nekuunangisa kubeche rake muviri wake uchidedera, mboro yangu ihombe uye iri circumcised saka paakazoiti dzvi, mwana akakanuka kuti Ahh! ndobva adaidza zita rangu softly achibva adzika kunonanzva muzvambarara wezimboro rangu, ndakamurega achiita hunyanzvi hwake nerurimi rwake pamboro yangu achipinza rurimi rwake pakaburi kemboro achinzwa kuvavirira kwetumisodzi twayo tweshungu, apedza akasimudza chiso chake kuti ndimutarise mumaziso, ipapo ndakaona those brown eyes dzakaita seavhundutswa nemakuriro emboro yangu asi achindiudzazve kuti aiva ava kuda kusvirwa.
Mwanasikana akatanga kundibvisawo mbatya dzose achitanga kupuruzira bvudzi repachipfuva changu nechoya changu nekutamba nema nipples angu nerurimi rwake nekukwizira mazamu ake pachipfuva changu wanikwe ini ndongoshona semvura inovira. Akabva ashadabura makumbo ake almost 180 degrees matinji ake nemusombo wake zvikati waya pachena ndokubva andibata muchiuno. Semwana wandaive ndada zviri so natural for a long time, ndakanga ndatononokerwa, ndakasudurudza chiuno changu kumashure zvishoma iye ndokudanazve zita rangu softly ndokuti ”take it easy babe usazondikuvadzawo hanti?” ipapo ndakagutsurira musoro ndokudzosa chiuno changu mboro yakananga pabeche rake, akabata mboro yangu nemaoko maviri ndokuipinza maari very slowly and gently, mboro yakapinda zvekumanikidzira nekunyengetedza nekuti beche rake raiva riri firm risina kudhamba seurimbo. Ipapo ndakanzwa sendainanairwa nemasvosve muviri wose nzeve dzangu dzikarira gotsi rikati papata nekunakirwa nebeche raitsvedzerera nekuda mboro. Ndakamubata muchiuno ndichidhonzera beche kwandiri ndokumukoira deeply ndichinyudza mboro yese in deep slow thrusts rumwe ruoko ruchitambisa musombo wake (clit**is), akachemerera nekugomera nekukura kwayo mboro. Akandibata magaro angu ose akanyudza minwe yake maari kureva kuti ainakirwa nayo mboro. Haana kunonoka kujaira mboro yangu neniwo ndakabva ndajaira beche rake sevanhu vaiva vadanana kare kare chinyararire. Takakoirana deeply zviuno zvikapisa uku ndichiyamwa mazamu ake, mwana akarova chikapa chakapenga semunhu aibva kumakorekore, chiuno chake chaiita zvekugwina chichitenderera in circles beche riri pazimboro, akakoira mboro achiteedzera rhythm yangu, ndikarikoira zvekunonokera iye ononokerawo, ndikakasika iye aitambisa chiuno nemhata zvimwechetezvo zvekuti tose takanzwa kuwirirana kwemboro nebeche, beche rake haraisvipa mboro yangu, yairamba yakanamatira irimo munyini yake
Mboro yangu yakarova makona ese ebeche rainaka zvakaoma, matinji ake ndaianzwa achiita zvekubata zimboro rangu achiita sekunamatira pariri uku machende angu achirova kumhata kwake kuti tya tya tya, ndakamusvira takadaro kwechipo che 30minutes asi iye haana kuneta pachikapa, zvamunoona ukanyatsoitirwa chikapa unochema chete nekunakirwa. Tose taichemerera zvinyornyoro tichidaidzana mazita softly, mwanasikana akakanda musoro wake shure ndokurega kundibatirira ndokuisa maoko ake pamubhedha akagara nemanhede akavhura beche rese, ini ndakasimuka ndokunopfugama ndava pamubhedha kutevera beche rakanunira ndokuripomba akadaro zvengozi chaizvo, akachemerera achipindura maziso ake akanaka nekunakirwa, one hour yakunokwana ndichingopombora beche non-stop, ndakamufongoresa pakona yemubhedha ini ndokuita zvekumira ndakatsika mubhedha negumbo rimwechete ndokuita zvekudzvura beche nemboro ndichiita sekusvetukira pariri uku ndakabata mazamu ake ndichitswinyirira tuminyatso, pamwe ndombosveerera mberi kwake ndakabata beche uku shure ndichirikwatura nemboro zvakadaro, handina kuziva kuti mwana uyu anogona chikapa pa doggy style futi, akakunyungudza chiuno nemagaro akatsvukira segoridhe akabata rimwe garo rake neruoko rwumwechete uku achigomera zvinopa manyemwe pese paipinda mboro mubeche rake achiti ‘‘aaah aaaah unogoooona kaaaani, aaaah aaaaah aaaaamai kaaaani ndakuvaaara nemboro kaaaani’’ .
Apa ndakabva ndaita zenze chairo ndokutanga kuita zvekukodzonga beche nayo mboro zvine simba ndichirova mudhuri wekumusorosoro kwebeche mumativi emuromo wechibereko chake, ndaiti ndikarova divi iri kagumi, ndorova rimwe kagumi ndozorova ipo pamuromo wechibereko chaive chakashama chichikweva tip yemboro yangu iye achingoti ”mboro yako iri kunaaaaka kaaaaani, mboro yako inondinakira kaaaaani…svirisa please, ndisvire kaaaani, koira usamire, ndanzwa kaaaaani, ende unonyatsogona kusvira maiweeee mai kaaaani amaaaaai ndasvirwaaaa” uku kwaive kundikuza ndikafara kuti mukadzi wandinoda anoitawo appreciate kugona kwangu kusvira ondikurudzira. Ipapo ndakabata musoro ndichikwesha beche chiuno changu chichienda from side to side yakazaramo kwekanguva kusvikira atanga kusura nayo mboro. Ndakamutasva sebhiza riri pamujawo pasina tsitsi iye achiridza kamhere kekunakirwa. Mwana uyu aiita communicate neni pakusvirana achindibvunza kuti ‘‘babe uri kunakirwa nebeche rako heeeeeere? Ndiri kukupa zvaunoda here mudiiiiiwa? Ndoita sei kuti unakirwe more babe? Ndisimudze gumbo here? Ohhh ndanyatsofongora babe achisimudza matako kumboro, Ahhhh unonaka kaaaani’’ ini ndichimupindura kuti ainditapirira zvisingaite kuita sendichataura chicheche ndichimukwira chete pasina zororo. Hakuna mukadzi akambobvira andibvunza kuti ndiri kunzwa sei pakusvirana, she was the first ever! Ndaiti ndikanzwa kuda kutunda ndozvomora mboro ndokoira kumuromo webeche chete nehafu yemboro ndozoinyudza zvakare yese ndichiita move from side to side zvakare ndichikoira beche zviya zvekurisakadza asi rakaramba riri tight around mboro yangu, pandaiita ma shallow thrusts iye akabva agwina muviri wese nekunakirwa, mwanasikana aisunga beche rake pamboro yangu zvine rhythm zviya zvekunzwa kunge mboro yakapfekedzwa a tight ring uku achiita chikapa seasvikirwa……
Ndakamukanda pamusoro pangu iye ndokutanangira zimboro rakamira zvinotyisa, ndakamubata muchiuno ndokumusimudza ndichimujungirira pamboro yangu ini ndokunyatsosimudza chiuno changu kwaari ndokuita zvekujega beche nemboro, mwanasikaba akatanga kutomuka tomuka ari pamboro mazamu ake achitambatamba ndakaabata tuminyatso, akaitazve chikapa slowly in circles akagarira mboro yese zvayo musoro wake wakakandwa shure ini ndakabata matako ake ndichimubatsira kukoira, ipapo akagwinha-gwinha chiuno nemuviri wese zvese nebeche achitunda kashanu kashanu achichemerera ‘‘maiwe kaaaani, maiwe kaaaani, ahh ahh ahh wanditundiiiisa heyi, ndatuuuunda waaani’’ asi ini ndaive ndisati ndapedza naye. Ndakamupidigura ndokuita iya inonzi missionary style ndikamupomba zvebasa ndakamutakura makumbo pamafudzi, ndakatunda ndatundazve iye akandibatirira muchiuno zvine simba iniwo ndakamubata nechekumusana wake usingagumi mubhedha achikoirira mboro yake zvinodadisa….
Takaburuka pasi pa carpet mwanasikana akagara pasi akavhura makumbo zvinonwisa mvura ndokunditi ndipfugame ndakaisa makumbo ake pamusoro pezvidya zvangu iye otsikirira pasi seri kwangu, achibva andikumbira nekazwi katete kuti nditange ndamudya beche ndokuzoti hake ‘‘ohh beche rako, sviiiira wanonoka’’ apa ndopandakaziva kuti mwana wevanhu akanga ava in control pakusvirana kwedu nekuti akabva abatirira maoko ake ese pasi necheshure kwake zvishoma ndokusimudza chiuno chese nebeche rese kwandiri ndokukoira mboro in style, ini ndaive ndangobatirira pamatako ake, ndichitsindira beche nemboro kuita seichatyoka uku ndakavhura matako ake ndichipuruzira kumhata kwake kwaive kwatota nehuronyo hwangu, zvigunwe zvangu zvikuru zvaive zviri pabeche ndakaripanyangura rakanyatsoshama rakazara zimboro rangu, ndakachemerera rurimi rwava panze ndikarwerwa rute ndichiti ‘‘mukadzi wangu kaaani ndakutunda kaaani’’ ndichitunda magaroni ehuronyo kuti tsaa tsaa tsaa mukati mebeche mboro iri pamuromo wechibereko chaikweva mboro, ipapo ndakanzwawo iye ava kuyuwira sekambwanana beche nemboro zvichigwinhirana pamwechete tichitundirana hameno kuti kechingani mu hour nehafu yataikwirana. Takatarisana mumaziso tichitundirana kudaro tikanyemwererana tikaudzana kuti ndinokuda so much uku dikita richierera richirova pamazamu ake, ndakanzwa beche rese rapisa uye razara huronyo hwangu kuti tundu, humwe huchierera kuenda kumhata yake. Ipapo ndakamutsvoda zvine simba kwekanguva tikabva tangowira pasi tapera simba iye akandisunga nemakumbo ake ose ndokumbokotsira hedu Chikwengu: FINAL PHASE
Tamuka takanogeza shower ndikamumisa nemdziro ndakamusimudza gumbo rimwechete ndokumusvirazve zvinyoronyoro ndakamubata matako ake nerumwe ruoko iye akaisa maoko ake ose muhuro yangu tichirohwa netumvura twaitonhorera. Musi uyu handina kwandakaenda nekuti takaita dzimwe 3 rounds husiku hwese nemamwe mastayera ekukwirana, mwanasikana airara akabata mboro nemachende angu zvakare aindikumbira mboro neni ndichimukumbirawo beche topanana zvekuti ndakazoisvomhora kwatoedza. Mangwanani ndakamuona ava kufamba akatanangara makumbo beche rakazvimba nekurara achikoirwa nemuzvambarara wemboro.
Hupenyu hwangu hwese handina kumbonzwa mukadzi achindikumbira kuti ndimusvire over and over again kunze kwake mwanasikana uyu. Ndakangoerekana ndakunzwa mboro kumirazve ndakamutarisa achipfeka mangwanani iwayo. Ndakamufongoresa pachituru che dressing table ndokutarisa beche ndakarivhura neminwe yangu wanikwe rakazvimbirira rakatsvuka kuti piriviri asi rakanunira, mboro yakabva yatanga kurwadza nekuda kusvira ndokumubata bata pese panoita kuti atote beche ndokutangazve kumukwira sendichabvarura beche iye achichema nekurwadziwa nemboro ‘‘yuwi kaaaani zviri kurwadza kaaaani imbomira zvishoma babe ita mbichana kaaaani ndanzwaaaa babe usaise yese kaaaaani yuuuuuwi kaaaaani’’ ndakamira zvishoma iye akaedza kusimuka asi nehavi yebeche ndakamufongoresazve ipapo ndokumukoira nehafu yemboro ndichikurumidza, akachinja machemero nekunakirwa ndikaona ava kutambisa chiuno chake sedzingidzi achikoira mboro neshure achisunga mhata yake nekutunda, ndakabva ndanzwawo kunakirwa ndokutangazve kusakadza beche rakazvimba kudaro ndichinyudza mboro yese ndichikoira nesimba sendaidzingirirwa iye achiyuwira semukadzi ari kupona.
‘’maiwe ndofa kaaani mai ndofaaaa yuwi ndakufa mai maiweee maiweee yuwiiii aaaah aaaaah ummmmm wandikaurisa nhasi kaaani zvakwaaaana babe wandiomesera kaaani please’’ ndakamutundira ndakaita kunama beche nemboro, akayaura akadaro mboro ichivhuta yakazara kusvika kumatako ake, ndapedza naye ndakamusimudza zvinyoronyo ndokumuvatisa pamubhedha kuti ambozorora bonde ndava kunzwa tsitsi semunhu wandaida zvikuru. Mwana uyu ndakaenda naye kunanatete mushure memwedzi ndatanga kumukwira ndikamuroora tikachata white wedding after 6months.
Handina shungu nevamwe vakadzi nekuti beche riri mumba mangu rakakwana, rinogezwa, harina kudhamba uye rinonaka zvazviri, zvakare rinowirirana nemboro yangu. Madzimai kuzaiwo varume venyu kana masvirwa zvinonaka kwete kungoyuwira chimhukutira, rovai chikapa kwete kungozvambarara sedanda baba vachiita zvese, kumbiraiwo mboro kana mava kuida zvichireva kuti tangaiwo varume venyu mu bedroom makavapfekera zvinomisa mboro nekuti zvinopa excitement mumba, gezaiwo beche, mhata nemuviri wose kuti vanababa vasvisvine beche nekurisvira vakachena moyo, zvakare mukanwa ngamugezwe kuitira kuti kiss dzitapire panguva ye foreplay. Mudzimai wangu inyanzvi pazvese izvi saka handimusiye dakara rufu…….
Short Story:I always had eyes on him
· Published July 13, 2015
Kuzvambura maiguru, mukoma wemukadzi nayo tsvimbo nyoro!
Kusvira Tsvarakadenga yakanaka semukati mendege
· Published June 17, 2014
Next story Revenge: Kusvirwa nebest friend yemurume wangu
Previous story FINAL PHASE PACHIREMBA NA XTREME